उद्योग वाणिज्य महासंघकाे मतदानमा जे देखियाे... नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को मतदान जारी छ। बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षलगायत पदाधिकारी चयनका लागि चुनाव भइरहेको हो। ६४ पदका लागि १ सय २७ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। साैरभ रानाभाट
भुकम्पपछि क्षति पुगेको रानी पोखरीलाई पुन: निर्माण गरिएको हो। भूकम्प गएकै वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भूकम्पले क्षति पुर्‌याएको सम्पदा पुनःनिर्माणको सुरुआत रानीपोखरीबाटै गरेकी थिइन्। साैरभ रानाभाट
देशका विभिन्न ठाउँमा बलात्कार बढ्दै जान थालेपछि त्यसको विरोधमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरुले बलात्कारीलाई कडा सजायको माग गरेका छन्- साैरभ रानाभाट
शुक्रबार देशभर थपिएका २ हजार ५९ जना कोरोना संक्रमितमध्य काठमाडौं उपत्यकामा १४ सय ९ जना छन्। उपत्यकामा कुनै दिन त २ हजारभन्दा धेरै संक्रमित पनि थपिएका छन्। साैरभ रानाभाट
जनता माग्छ अस्पताल, सरकार दिन्छ भ्यूटावर
नागरिक स्तरबाट डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा सत्याग्रह थालिएको छ। साैरभ रानाभाट
सत्यको आग्रह अर्थात् सत्याग्रह
असनरत डा‌. गोविन्द केसीकाे पक्षमा राजधानीलगायत देशभरि प्रदर्शन भइरहेका छन्। काठमाडौंमा उनकाे जीवन रक्षाकाे माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा राजनीतिक दल अनि युवाहरूले दिनदिनैजसाे प्रदर्शन गर्दै आएका छन्- साैरभ रानाभाट
'सरकार सुतेको र डा. केसी जागेको आज २२औं दिन'
कोभिड र इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प गरेर दिउँसो १ बजेबाट ३ बजेसम्म चिकित्सकहरूले अस्पतालदेखि महाराजगन्ज चोकसम्म र्‍याली निकालेका हुन्। साैरभ रानाभाट
‘हामी डा. केसीकाे साथमा’ भन्दै काम छाेडे डाक्टरहरूले
उनीहरूले आइतबारदेखि दैनिक दुई घन्टा इमर्जेन्सी र कोभिड उपचारबाहेकका अन्य सेवा ठप्प गर्न भएका हुन्। साैरभ रानाभाट
दसैं-तिहारका लागि काठमाडौंका १० ठाउँमा ‘सस्तो पसल’
खाद्य कम्पनीले थापाथली, रामशाहपथ, नख्खु, लगनखेल र सूर्यविनायकमा रहेका बिक्री काउन्टरमा नै सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन भएका छन्। साैरभ रानाभाट
सम्झनालाई न्याय देऊ
बझाङकी १२ वर्षीया सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको विरोधमा अहिले देशैभरि प्रदर्शन भइरहेको छ। हत्यारालाई कारबाही गर्न र सम्झनालाई न्याय माग्दै सोमबार पनि काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको थियो। साैरभ रानाभाट
सुनसान पर्यटन, सुनसान ठमेल
याे वर्ष २०२० काे पहिलाे तीन महिनामा २ लाख ३० हजार विदेशी पर्यटकलाई स्वागत गरेकाे नेपालले गत वर्ष १२ लाख पर्यटक भित्र्याएकाे थियाे। गत वर्षकाे हाराहारी पर्यटक भित्र्याउन सन् २०२५ पुग्नैपर्ने व्यवसायीकाे भनाइ छ। साैरभ रानाभाट
रथ छाडेर मूर्तिमात्रै लगियो बुङमती
केही समयअघि स्थानीयले जर्वजस्ती रथ तान्न खोज्दा झडप भएको थियो। त्यसपछि स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा सांकेतिकरुपमा रथ तानिएको थियो। सोमबार भने मूर्तिमात्रै खटमा राखेर बुङमती लगिएको हो। साैरभ रानाभाट
कोरोनामा फुक्काफाल काठमाडौं
निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै राजधानी काठमाडौंमा चहलपहल बढेको छ। बिहानैबाट सडकमा बिजोर नम्बरका सवारीसाधन चाप बढेको छ। बिहानको समयमा पसलहरू खुलेसँगै मानिसको बाक्लो भीडभाड देख्न सकिन्थ्यो। साैरभ रानाभाट र शिरिश मान महर्जन